Waa kuma ciyaaryahanka Quraafaadka layaabka leh aaminsan ee ka tirsan Kooxda Manchester United!? – Gool FM
Waa kuma ciyaaryahanka Quraafaadka layaabka leh aaminsan ee ka tirsan Kooxda Manchester United!?
Haaruun September 26, 2019
(Manchester) 26 Sebt 2019. Ciyaaryahanka tirsan kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa aaminsan quraafaad, waxaana uu u safraa 400 oo mayl si uu timihiisa u soo jarto, isagoo rumeysan inay taasi ka gacan siinayso inuu guulo gaaro oo uu goolal dhaliyo.
Waxaa jiro xiddigo iyo macallimiin badan oo kubadda cagta caan ka ah oo quraafaadyo u gaar ah aaminsan, waxaana ka mid mid ah macallinka Tottenham ee Mauricio Pochettino oo rumeysan quraafaadka liinta, isagoo liin cusub soo dhigta xafiiskiisa mar waliba oo kulan weyn ay kooxdiisu ciyaareyso.
Haddaba muuqaalka hoose ayaad ka daawan kartaa ciyaaryahanka quraafaadkaas layaabka leh aamisan ee u safra 400 oo mayl si timaha loogu soo jaro kana tirsan Man United, waxaana soo jeedinaya Haaruun Yuusuf Khasaaro.
FIFA oo beenisay in Lionel Messi uu musuq-maasuq ku qaatay abaal-marinta The Best
Xavi oo durba la ogaaday xiddiga uu doonayo inuu ku soo biiriyo Barcelona haddii uu tababare u noqdo